Dimy amin'ireo tsara indrindra paosy-salantsalany finday avo lenta - News Fitsipika
Dimy amin'ireo tsara indrindra paosy-salantsalany finday avo lenta
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Dimy amin'ireo tsara indrindra paosy-salantsalany finday avo lenta” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Talata 17 Novambra 2015 07.00 UTC
Tamin'ity taona ity no mbola ny tsara indrindra ho an'ny finday avo lenta, miaraka amin'ny endri-javatra mahasoa kokoa, tsara kokoa teti-dratsy sy nohatsaraina be rindrambaiko. Fa izany ihany koa ny taona izay efa hita fa ambony ny traikefa Tsy voatery lafo ambony sy ny tsara dolara finday avo lenta tsy maintsy manana goavana efijery.
Ity misy fijery haingana dimy tsara indrindra finday avo lenta misy izay tsy haninjitra ny tananao.
Ny Sony Xperia Z5 Compact ny 23-megapixel fakan-tsary dia ny tsara indrindra Sony mbola. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Sony ny flagship kely 4.6in telefaonina dia manana lamba amin'ny voalamina tsara izany raharaha izay mahatonga ny mahery indrindra kely finday avo lenta misy amin'izao fotoana izao. Ny fifadian-kanina sy ny marina tondro scanner miafina eo ambany fahefana ny bokotra eo amin'ny ilany ankavanana ny telefaonina, ka tsy ilaina ny mametraka ny fanondrony amin'ny bokotra an-trano mba hamoha ny fitaovana.
Ny vaovao 23-megapixel fakan-tsary dia ny tsara indrindra Sony mbola, ary arguably iray amin'ireo tsara indrindra misy. Mila microSD karatra ho fanampiana fanampiny fitehirizana sy ny telefaonina dia tantera-drano ny rano lalina ny 1.5m for 30 minitra, izany hoe ny nandeha nidina ny Loo dia tsy ny faran'izao tontolo izao.
Fa izany dia ny telo-andro bateria ny fiainana izany no namono endri-javatra. Izany no lava indrindra maharitra farany finday avo lenta avo-misy amin'izao fotoana izao.
Didim-pitsarana: mahery vaika, tantera-drano finday avo lenta izay maharitra telo andro eo amin'ny fiampangana
Sony Xperia Z5 Compact famerenana: arguably kelikely kokoa ny tsara indrindra finday avo lenta
Thin, hazavana sy fifadian-kanina: Samsung Galaxy ny S6. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny Galaxy Samsung S6 dia ny fihetseham-po voalohany Premium-flagship finday avo lenta miaraka amin'ny rehetra-vy sy fitaratra vatana, ary dingana lehibe ao nanaovana midika izany ankehitriny mifanaraka ny fifaninanana.
Izany no haingana indrindra amin'izao fotoana izao fihetseham-po finday avo lenta misy, zipping eo amin'ny fampiharana sy ny midedadeda amin'ny alalan'ny lalao. Izany dia lehibe 16-megapixel fakan-tsary izay ao amin'ny tsara indrindra avy any, ny mahafinaritra 5.1in 2K efijery, ary izany thinner sy maivana kokoa noho ny mpifaninana.
-Tondro sensor ambanin'ny an-trano ny bokotra manokatra ny telefaonina ary afaka hanamarinana fa ara-vola. Izany dia midika hoe nahazo Wireless ihany koa fa mamaly ny sy ny bateria ampy hahita anareo amin'ny alalan'ny andro.
Didim-pitsarana: ny haingana indrindra fihetseham-po fotsiny zips finday avo lenta izay miaraka
Samsung Galaxy S6 famerenana: ny iPhone mpamono olona
Processor 70% Haingankaingana, rantsan vaovao pirinty scanner - nefa mahantra ny fiainana bateria mamela ny Apple iPhone 6S teo. Sary: Kiichiro Sato / AP
Ny iPhone 6S no farany 4.7in modely avy Apple, ary iray amin'ireo tsara indrindra finday avo lenta madinika misy. Tena lehibe indrindra fivarotana endri-javatra dia fanerena mora efijery, izay mamela fihetsika vaovao sy ny 12-megapixel fakan-tsary izay afaka hisambotra Live-tsary - mbola snaps miaraka amin'ny lahatsary fohy nalaina tamin'izany andro izany.
Ny metaly vatana ankehitriny tamin'ny ny sarotra aluminium izay mampihena ny scratches. Ny processeur dia 70% haingana kokoa noho tamin'ny taona lasa. Vaovao Apple Touch ID tondro scanner dia saika instantaneous, raha ny vaovao Engine Taptic mamokatra lehibe tadin staccato Feedback.
Tena lehibe indrindra dia ny bateria lafy ratsiny izay tsy haharitra ny andro, izany hoe ianao mety tsy maintsy handidy azy nandritra ny andro sy ny alina.
Didim-pitsarana: telefaonina kely lehibe simba ny mahantra bateria fiainana
iPhone 6s famerenana: tena tsara telefaonina simba ny fako bateria fiainana
Google Rohy 5X
Tsy misy bloat ao amin'ny Rohy 5X. Sary: Justin Sullivan / Getty Images
Google ny farany tsy phablet flagship, ny Rohy 5X, dia ny mpandimby ny malaza Rohy 5 amin'ny 2013.
Izany dia 5.2in tsara efijery, dia mahia sy ny fahazavana ary no iray amin'ireo finday avo lenta voalohany mba mihazakazaka ny farany dikan-Android 6.0 Marshmallow. Ny finday, atao amin'ny LG for Google, mikoriana Android ny fomba goavana ny fikarohana natao izany, tsy misy bloatware ary hahazo rindrambaiko vaovao alohan'ny zavatra hafa rehetra.
Ny fifadian-kanina sy ny marina tondro sensor ao ambadika mifanaraka voajanahary eo ambanin'ny rantsan ny Foto-kevitra ho an'ny mamoha ny finday sy ny fanamarinana tsy azo lavina vola. Izany ihany koa dia manana karazana USB-C seranan-tsambo, izay midika hoe ny telegrama azo plugged amin'ny Na ahoana na ahoana ny handidy. Ny bateria maharitra momba ny andro, nefa tsy mainka.
Ny fakan-tsary dia iray amin'ireo tsara indrindra eny an-tsena ary mora ampiasaina mba haka sary lehibe.
Didim-pitsarana: fifadian-kanina, hazavana sy bloat-maimaim-poana, ny fomba natao izany Google
Google Rohy 5X famerenana: ny olona finday Android?
Fanintelony tsara vintana ... ny farany Motorola Moto G. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Motorola fahatelo-taranaka Moto G no mbola lehibe indrindra, ary no tsara indrindra-manodidina rehetra finday avo lenta fa tetỳ ambanin'ny £ 200.
Dia mihazakazaka Android tsy misy fanovana, no snappier noho ny fifaninanana sy hahazo tsara ny fototra. Ny bateria Maharitra andro mahafaly, mazava kokoa amin'ny fampiasana, Ary mahatsapa tsara na dia miharihary amin'ny customizable plastika matevina lamosiny.
Ny Moto G dia tantera-drano ny IP67 fitsipika na 1m rano ho an'ny 30 minitra, izay midika fa Ho tsara raha handao azy eo amin'ny fandroana, na tratra eo ny orana.
Ny fakan-tsary dia afaka fakàna ambony-eo ho eo tifitra saingy misy microSD slot ho an'ny fanampiana karatra fahatsiarovana bebe kokoa raha 8 na 16GB naorina-in Tsy ampy.
Didim-pitsarana: ny tsara indrindra mahay mandanjalanja ny vidin'ny hiaina misy
Motorola Moto G (3RD Gen) famerenana: ny tsara indrindra nahazo teti-bola fotsiny finday avo lenta kokoa
Mobile teknolojia slogs izany tamin'ny ady ho an'ny Fitness ampy
34799	1 Paoma, Article, Computing, Google, Internet, iPhone 6s, Finday, Motorola, Famerenana, Samsung, Samuel Gibbs, Smartphone, Sony, Teknolojia, fifandraisandavitra, Notsapaina sy nosedraina
← New finday avo lenta bateria dia afaka mandidy ny 48% amin'ny dimy minitra Toaka tokoa ve hahatonga anao tsara kokoa teo am-pandriana? →